HUAWEI Sound X | Myanmar Tech Press
HUAWEI Sound X သည် Devialet ၏ Speaker Active Matching (SAM®) နည်းပညာစွမ်းအားကို အသုံးချပြီး speaker ရဲ့အသံကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပါတယ်။ Dual subwoofers သည် အသံနှုန်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပြီး သင် ကြားသင့်သည့် မြင့်မားသောအတိုင်းအတာကို သယ်ဆောင်လာပေးပါတယ်။. Bass သည် 40 hz ရှိပြီး အမြင့်မားဆုံးအသံလှိုင်း 20 mm အထိရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့် သင်တွေ့မြင်၊ နားဆင်နိုင်ပြီး တုန်ခါမှုကိုပါခံစားနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။
HUAWEI Sound X က အရွယ်အစားသေးငယ် သော်လည်း စွမ်းအားကြီးမားပါတယ်။ ၎င်း၏ dual subwoofers ကို ရှားပါးသည့်သံလိုက်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အားပြင်းသောတုန်ခါမှုကိုပေးပါတယ်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်ထိခိုက် လွယ်သည့်အပြင် အင်အားအနည်းငယ်ထည့်ရုံမျှဖြင့် အားကောင်းသောအသံကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အရွယ်အ စားကြောင့်မဟုတ်ပဲ အသံကြောင့်အံသြသင့်စေမှာပါ။
HUAWEI Sound X က ကြိုက်နှစ်သက်သလောက်ကျယ်လောင်စွာ နားဆင်လိုပါက SPL 93 dB2 အထိ ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကို ပေးစွမ်းပါတယ်။. ပုံမှန် speaker များမှာ အသံအကျယ်ဖွင့်ပါက တုန်ခါပြီး အရည်အသွေးကျတတ်ပါတယ်။ HUAWEI Sound X အတွက်ကတော့ Devialet ရဲ့ Push-Push Acoustic ဒီဇိုင်းကြောင့် ဒါကပြသနာမဟုတ်ပါဘူး။ Subwoofers တစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့စနစ်ကတုန်ခါမှုကို လျော့ချပေးပြီး အသံအတိုးအကျယ်များ မှာ ပုံပျက်ခြင်းမရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
HUAWEI Sound X က အသံကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရန် ကြွယ်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်ကို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ Speaker တွင် HUAWEI Sound algorithm ကိုအသုံးပြုထားသော အားကောင်းသည့် tweeters (၆) ခုပါဝင်ပြီး ကြီးမားတဲ့နေရာ တစ်ခုအတွက် ကောင်းမွန်သောအသံကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Tweeter တစ်ခုချင်းစီက အကောင်းဆုံးအသံအတွက် သီးခြားဒီဇိုင်းတစ်ခုစီပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အားလုံးပေါင်းသောအခါတွင် speaker ၏ frequency သည် အမြင့်ဆုံး 40 Khz2 အထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာသီချင်းနားထောင်နေစဉ်မှာပဲ တကယ်ခံစားနားဆင်ချင်လာပါက HUAWEI Sound X ကို တစ်ချက်ထိဖို့ပဲလိုပါတယ်။ Dual subwoofers နှင့် automatic sound field awareness တို့နဲ့ သင့်အတွက်သီချင်းနားထောင်ရတာကို မတူညီသောခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI Sound X ၏တည်ဆောက်ပုံ၊ touch-sensitive ခလုပ်များနှင့် ပြောင်လက်သောမျက်နှာပြင်တို့ကြောင့် အထိအတွေ့၊ အမြင်၊ အကြား အရာအားလုံးက နှစ်လိုဖွယ်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သေသပ်ပြီး စတိုင်ကျစေပါတယ်။ ထင်ရှားသောဒီဇိုင်းက subwoofers ကြည့်နိုင်ရန်ပြတင်းပေါက်လေး ထားရှိထားပေး တာကြောင့် bass ကိုကြားနိုင်ပြီး ခံစားနိုင်မှာပါ။
← တန်ဖိုးသင့်စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ vivo Y91C 2020
သင့်တင့်သော ဈေးနှုန်း၊ စွဲမက်ဖွယ် ဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့် Samsung Galaxy M 11 စမတ်ဖုန်း →